पृथ्वीमा खस्दैछ चीनको स्पेस स्टेशन, तर कहाँ ? – doodhmati || dudhmati
Home / विचार / पृथ्वीमा खस्दैछ चीनको स्पेस स्टेशन, तर कहाँ ?
Sujeet Jha March 28, 2018	विचार, विश्व 270 Views
बेइजिंग, चैत १४ ।
चीनको ‘स्पेस स्टेशन’का अवशेष चाँडै पृथ्वीमा खस्ने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुले स्पेस स्टेशन पृथ्वीको कतातिर खस्छ भनेर निगरानी बढाइरहेका छन् ।
द तियाँगोंग-१ चीनको महत्वकांक्षी अन्तरीक्ष कार्यक्रमको हिस्सा हो । यसलाई सन २०२२ मा अन्तरीक्षमा मानव स्टेशन स्थापित गर्न लक्ष्यको पहिलो हिस्सा मानिएको थियो ।
सन २०११ मा अन्तरीक्षमा पठाइएको उक्त स्टेशनले पाँच वर्षसम्म राम्रै काम गरेको थियो । पाँच वर्षमा काम गरेपछि पृथ्वीमा झर्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले कहाँ कुन समयमा झर्ने हो पत्ता लगाउन मुस्किल भएको छ किनकी अहिले यो यन्त्र नियन्त्रण बाहिर छ ।
एक अनुमानअनुसार ३० मार्चदेखि दुई अप्रिलसम्म यो यन्त्रमा जमीनमा झर्न सक्छ । धेरै स्पेस स्टेशन अन्तरीक्षमै जलेर नष्ट हुन्छन् ।
कहाँ झर्छ ?
चीनले सन २०१६ मा द तियांयोंग-१ सम्पर्कविहीन भएको र नियन्त्रण बाहिर गएको पुष्टि गरेको थियो । द युरोपियन स्पेस एजेन्सीको भनाइअनुसार यो क्रमशः पृथ्वीको नजिक आउँदै छ ।
द अष्ट्रेलियन सेन्टर फर स्पेस इन्जिनियरिङ रिसर्चका उपनिर्देशक डा एलियास अबाउटेनियसले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘जब यो पृथ्वीको १०० किलोमिटर नजिक आउँछ गर्मी चढ्दै जान्छ र धेरैजसो स्पेस स्टेशन जलेर नष्ट हुन्छ ।’
यो स्पेस स्टेशनको बारेमा चीनले केही जानकारी नदिएकाले स्वरुपको बारेमा पनि धेरैलाई जानकारी छैन ।
चिन्तित हुन जरुरी छैन
विभिन्न अनुसन्धान अनुसार वातावरणमा गुज्रिँदा ८.६ टनको अधिकांश हिस्सा आफै नष्ट भएर जान्छ । इन्धन ट्याङ्की र रकेट इन्जिन पुरै नजल्न पनि सक्छ र, बचेका टुक्राहरु पृथ्वीमा खस्छ ।
तर त्यसले पनि त्यति धेरै हानी नपुर्‍याउने विभिन्न वैज्ञानिकले बताएका छन् । बाँकी बचेका टुक्रा चट्याङको शैलीमा खस्ने भन्दै वैज्ञानिकले त्यसबाट मानवीय क्षतिको सम्भावना कम हुने बताएका छन् ।
द यूरोपियन स्पेस एजेन्सीका प्रमुख होलगर क्रेगले भने, ‘मेरो अनुमानअनुसार यसबाट क्षतिको आशंका चट्याङ् जत्तिकै हुन्छ । चट्याङ पर्दा क्षतिको आशंका निकै कम हुन्छ ।’
के सबै पृथ्वीमा खस्छ ?
डा. एलियाश भन्छन् धेरै अवशेष पृथ्वीतर्फ आउँछन् र यी समुद्रमा वा आवादी इलाका भन्दा माथि नै जलेर खरानी हुन्छन् ।
स्पेश स्टेशन र क्राफ्टबीच सन्चार कायम भयो भने यसलाई चाहेको ठाउँमा खसाल्न सकिन्छ ।
यसलाई दक्षिण प्रशान्त महासागरमा अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र दक्षिण अमेरिकाको बीचमा खसालिन्छ । १५ सय वर्ग किलोमिटरको यो क्षेत्रलाई स्पेस क्राफ्ट र स्याटलाइटको मसानघाट पनि भनिन्छ ।
Tags चीनको ‘स्पेस स्टेशन’
Previous सञ्चय कोषमा तीन अर्ब बेवारिसे
Next जनकपुरको सडक विस्तार अभियानको ठाउँ ठाउँमा प्रशंसा, अब जनक चोकदेखि जानकी मन्दिर हुँदै रामानन्द चोकसम्म विस्तार गरिने
December 13, 2017	4,633